Ogaden News Agency (ONA) – Xubnaha G. Dhexe ee ONLF ee Waqooyiga Yurub oo Kulan Labo Bari Socday Shalay Oogu Sooxidhmay Wadanka Denmark.
Xubnaha G. Dhexe ee ONLF ee Waqooyiga Yurub oo Kulan Labo Bari Socday Shalay Oogu Sooxidhmay Wadanka Denmark.
Posted by ONA Admin	/ October 19, 2014
Waxaa shalay ooy taariikhdu ahayd 18/10/2014, lagu soo gabagabeeyay Caasimada wadanka Denmark ee Copenhagen kulan si heersare ah loosoo agaasimay oo socday mudo labo bari ah. Waxaa kulankan iskuguyimid Masuuliin sar sare oo kamid ah Gudiga Fulinta iyo Golaha Dhexe ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia (JWXO). Masuuliintan oo kusugan Woqooyiga Qaarada Yurub ayaa kulankoodan qiimayn balaadhan oo dhinacyo badan taabanaysa kusameeyay marxalada uu Halganka Gobanimadoonka Somalida Ogadenia uu maanta marayo iyo sidii hawlaha halganka kor loogu qaadi lahaa. Waxaa kaloo kamid ahaa ajendeyaasha shirkan fashilinta shirqoolada uu Gumaysiga Itoobiya umaleegayo shacabka Somalida Ogadenia ee gumaysi diidka ah. Waxaa kale oo kulankan siqoto dheerleh loogu gorfeeyay sidii looxoojin lahaa wadashaqaynta iyo xidhiidhka kadhexeeya Jaaliyaadka Somalida Ogadenia ee Qaarada Yurub kahawlgala.
Dhanka kale waxay Masuuliinta JWXO ee kulanka kaqaybgalay shir balaadhan laqaateen Masuuliinta iyo Hawl-wadeenka Jaaliyada S.Ogadenia ee kudhaqan wadan Denmark. Kulankan oo ahaa mid aad uwanaagsan ayay Madaxda JWXO bogaadin iyo dardaaran macno iyo murti badan xambaarsan lawadaageen kaqaybgaleyaashii shirkan iskugu yimid. Waxaa madasha uu kulankan kasocday khudbad aad uxamaasad badan aadna loogu diirsaday kajeediyay Halgame Rayaale Xaamud, asagoo Mudanuhu siqotodheer leh uqeexay isla markaana utilmaamay waajibaadka iyo masuuliyada kasaaran xubin kasta oo kamid ah shacabka Ogadenya kaqaybgalka xornimada Ogadenia iyo ilaalinta midnimada iyo wadajirka shacabka S.Ogadenia ee halganka dheer oogu jira siday ooga xoroobi lahaayeen Gumaysiga Abasiiniya ee gabalkiisu dhacay. Waxaa sidoo kale khudbad kooban madasha kulankan kajeediyay Lataliyaha Gudoomiyaha JWXO, General C/laahi Mukhtaar, oo mahadnaq iyo bogaadin balaadhan usoo jeediyay dhamaan Gudoonka iyo xubnaha Jaaliyada Denmark ee kaqaybqaatay hirgalinta iyo fududaynta kulankan ay Masuuliinta JWXO kuyeesheen magaalada Copenhagen.
Kulankan oo ahaa mid ujeedadii laga lahaa siwanaagsan looga yool gaadhay ayaa kusoo dhamaaday jawi aad uwanaagsan iyadoo dhamaan Masuuliintii kaqaybgalay kulankan ay aad oogu riyaaqeen maamuuskii iyo soodhawayntii ay ufidisay Jaaliyada S.Ogadenia ee wadanka Denmark, waxaana hoosta laga wada xariiqay hirgalinta iyo xoojinta wadashaqaynta kadhaxaysa jaaliyaadka iyo Hawl-wadeenada kala duwan ee Halganka Somalida Ogadenya.